दुईपटकको च्याम्पियन भारतले लिग चरणमा एक खेलमात्र हारेको थियो। अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर सेमिफाइनलमा पुगेको भारतको सशक्त ब्याटिङ पंक्ति यसरी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कमैले सोचेका थिए।
यो हारसँगै विश्वकपकै मुख्य दावेदारमध्येको एक भारतको यात्रा सेमिफाइनलमै समाप्त भएको छ। अघिल्लो संस्करणमा पनि भारत फाइनल पुग्न असफल भएको थियो। न्यूजिल्यान्ड भने फाइनलमा चीर प्रतिद्वन्द्वी अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको थियो।
म्यान्चेस्टरको ओल्ड ट्राफोड मैदानमा २ सय ४० रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतको शीर्ष क्रम ध्वस्त हुँदा इनिङ्सको ३ बल बाँकी छँदै २ सय २१ रनमा अलआउट भयो। पछिल्लो खेलमा सतक प्रहार गरेका भारतीय ओपनरहरु लोकेस राहुल र रोहित शर्मा समान १ रनमै आउट भएका थिए। कप्तान विराट कोहलीले पनि १ रनमात्र बनाउन सके। दिनेश कार्तिक ६ रन बनाएर आउट हुँदा १० ओभरमा भारत २४–४ को स्थितिमा पुगिसकेको थियो।
ऋषभ पन्त र हार्दीक पन्ड्याले ४७ रनको साझेदारी गरी इनिङ्स उकास्ने प्रयास गरे पनि २२.५ ओभरमा पन्त र ३०.३ ओभरमा पन्ड्या समान ३२ रनको व्यक्तिगत स्कोरमा आउट भएपछि भारत ९२–६ को दयनीय अवस्थामा पुगेको थियो।
सातौं विकेटका लागि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी र रविन्द्र जडेजाले १ सय १६ रनको साझेदारी गरी भारतलाई जितको आशा देखाएका थिए। भारतलाई जितका लागि ३२ रन आवश्यक हुँदा ७७ रन बनाएर खेलिरहेका जडेजा ट्रेन्ट बोल्टको बलमा लङ अफ क्षेत्रमा कप्तान केन विलियमसनको हातबाट क्याचआउट भए।
जडेजाले ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे। अर्को ओभरमा धोनी पनि रनआउटको शिकार बनेपछि भारतको आशा समाप्त भयो। लोकी फर्गुसनको बलमा २ रन लिने प्रयासमा रहेका धोनीलाई मार्टिन गुप्टिलले रनआउट गरेका थिए।
अन्तिम क्रमका ३ ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भए। न्यूजिल्यान्डका म्याट हेनरीले शीर्ष क्रमका ३ ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेपछि भारत मध्यम लक्ष्य पछ्याउन असमर्थ रहेको हो। ट्रेन्ट बोल्ड र मिचेल सान्टनरले पनि २/२ विकेट लिए।
वर्षाका कारण २ दिन लगाएर खेलिएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको न्युजिल्याण्डले मंगलबार ४६.१ ओभरमा २ सय ११ रन बनाएको थियो। म्यान्चेस्टरमा वर्षा नरोकिएपछि बुधबार बाँकी खेल खेलाइएको हो। न्युजिल्याण्डले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २ सय ३९ रनको योगफल खडा गरेको थियो।
न्यूजिल्यान्डका मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान कप्तान केन विलियमसन ६७ र रस टेलरले ७४ रन बनाएका थिए। भारतका भूवनेश्वर कुमारले ३ विकेट लिए।
स्वस्थ्य मन्त्रालयले समायोजनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै आफू निकट चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिने कर्मचारीको संख्या ह्वत्तै बढेको देखिन्छ।
कर्मचारी र चिकित्सकको मिलोमतोमा तयार पारिका रिपोर्टहरु मेडिकल बोर्डले पनि फटाफट सदर गरिरहेको छ। यति मात्रै होइन आफू निकट कर्मचारीलाई केन्द्रमा समायोजन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि मिलोमतो रहेको वीर अस्पताल स्रोतको दाबी छ।
झुठो रिपोर्टमाथि छानबिन गर्नुपर्‍यो भन्दै वीर अस्पतालका कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी समेत हालेका छन्। झुठा मेडिकल रिपोर्टहरु पेश भइरहेको गुनासो माथि ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘समायोजनको सूचना निस्केसँगै बोर्डबाट आउने सिफारिसको संख्या बढेको छ। रिपोर्टहरु माथि छानबिन हुन्छ।’
लामो समय केन्द्रिय स्वास्थ संस्थामा काम गरेका कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा पुग्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नो रोगका बारे बढाईचढाइ गरेर रिपोर्ट बनाएर पेश गरेर केन्द्रमा बस्ने दाउ गरेको स्रोत बताउँछ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेमा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार कडा रोगका बिरामी तथा गम्भिर र अशक्त कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन सक्छन्। यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै वीर अस्पतालका केही कर्मचारीले झुठो मेडिकल रिपोर्ट बनाएका छन् भने केहीले बनाउने प्रकृयामा रहेको स्रोतको दाबी छ। ती कर्मचारीले आफूलाई हुँदै नभएको रोगको मेडिकल रिपोर्ट बनाएर मेडिकल बोर्डमा पेश गरेका छन्।
निजामती नियमावली–२०५० अनुसार मुटु, मृर्गौला र क्यान्सरलाई कडा रोग भने पनि मेडिकल बोर्डले यी रोग बाहेक अन्य समस्या भएकालाई पनि सिफारिस दिइरहेको छ। एलर्जी, थाइराइड, उच्च रक्तचाप, बाथ जस्ता कडा नमानिएका स्वास्थ्य समस्या देखाएर केन्द्रमै बस्न कर्मचारीहरु मेडिकल बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन्।
वीर अस्पतालमा तलब बाहेक ५० प्रतिशत पाइने भत्ताको लोभमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि बोर्डको सिफारिस बनाएर उनीहरु बस्न खोजेका हुन्।
वीर अस्पतालको मेडिकल ओपीडीका कर्मचारी अहेब युवराज सुवेदीले राजनीतिक आस्था मिल्ने आफू निकिटका चिकित्सकसँग बढाइचढाइ मेडिकल रिपोर्ट बनाएका छन्। ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विभागका प्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीले बनाइदिएको रिपोर्ट अनुसार कर्मचारी सुवेदी लामो समय उभिन र हिँड्न सक्दैनन्। सुवेदी उनै कर्मचारी हुन् जो दैनिक भक्तपुरबाट मोटरसाइकल चढेर वीर अस्पतालसम्म काम गर्न आउँछन्। आफ्नो छुट्टै मेडिकल लगायत वीरमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन्। ‘उभिन नसक्ने व्यक्ति कसरी दैनिक मोटरसाइलकमा यात्रा गर्न र काम गर्न सक्छन? आन्दोलनमा दौडिने झैझगडामा अगुवा हुने पनि यीनै हुन्?’ स्रोतले भन्यो।
यसबारे कान्तिपुर दैनिकले संवाद गर्न खोज्दा सुवेदीले फुर्सद नभएको बताए।
झुठो मेडिकल रिपोर्ट बनाउने वीरका अर्का कर्मचारी हुन्– डिल्लीराम खनाल। उनी वीर अस्पतालको युरो ओपीडीमा कार्यरत छन्।
उनको कामै उभिएर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेलले बनाएको रिपोर्ट अनुसार उनलाई लामो समय हिँड्न, उभिन या उकालो–ओरालो गर्न मिल्दैन। समायोजन अन्तर्गत दुर्गममा जानु नपरोस् भनेर उनले आफ्नो पार्टी निकट चिकित्सकसँग मिलेर झुठो रिपोर्ट बनाई बोर्डमा पेश गरेका छन्। खनाल भन्छन्, ‘मेडिकल बोर्ड नै गरेको सिफारिस गरेको रिर्पोटमाथि प्रश्न गर्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन।’
‘आफू निकट चिकित्सकले सजिलै रोग लागेको सिफारिस बनाइदिन्छन्। त्यसैलाई मेडिकल बोर्डमा पेश गरेर सिफारिस लिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
यस्तै अस्पतालका अन्य कर्मचारीहरु सबिता जोशी, डिल्लीराम आचार्य, जीवन श्रेष्ठ, शंकरकुमार झा लगायतले बनाएको मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्दा उनीहरुलाई गम्भिर प्रकृतिको रोग भएको देखिँदैन।
हालसम्म मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएकै आधारमा ६४ कर्मचारीका समायोजन भइसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४, ५, ६ तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ९ औं र दशौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको टुंगो अन्तिम चरमा पुगिसकेको छ।
धुर्मुस -सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणको काममा फर्कियो